Imbali emva koKhuselo lweMasks eGesi
Izixhobo ezisincedayo nokukhusela amandla okuphefumula phambi kwegesi, umsi okanye ezinye iifubhe ezinobuthi zenziwa ngaphambi kokusetyenziswa kokuqala kwezixhobo zamachiza zamanje.
Iimfazwe zamanje zamakhemikhali zaqala ngo-Aprili 22, 1915, xa amajoni aseJamani asebenzisa i-chlorine igesi kuqala ukuhlasela amaFrentshi eYpres. Kodwa ngaphambi kowe-1915, abavukuzi, abacimi bomlilo kunye nabangaphantsi kwamanzi bonke babenomdla weemodemethi ezingabangela umoya ophefumulayo.
Iimpawu zokuqala ze-gas masks zaphuhliswa ukuhlangabezana nezidingo.
Ukulwa koMlilo kunye neMaski
Ngowe-1823, abazalwana uJohn noCharles Deane babenelungelo lokukhusela umsi okhusela izixhobo zamatshini abatshisi bomlilo owagqitywa ngokutsha ngamanzi aphantsi kwamanzi. Ngomnyaka we-1819, uAgasus Siebe uthengisa i-suit evolving early. I-suit ye-Siebe yayiquka isigqoko apho umoya waqhutyelwa khona ngethubhu ukuya kwisigqoko waza wachitha umoya ovela kwelinye ityhubhu. Umqambi wamisela u-Siebe, Gorman, kunye noCo ukuphuhlisa nokuvelisa iziphefumuliso ngeenjongo ezahlukeneyo kwaye kamva waba negalelo ekuphuculeni ukuphefumula.
Ngomnyaka we-1849, u-Lewis P. Haslett unelungelo lobunikazi "Umkhuseli we-Inhaler okanye umlenze," i-patent yokuqala yase-US (# 6529) ikhishwe ukuphefumula umoya. Isixhobo sikaHaslett sicolile uthuli emoyeni. Ngo-1854, isazi samakhemikhali saseScotland uJohn Stenhouse sakha i-mask elula esetyenziswe ngamathala ahlalutye.
Ngowe-1860, amaFrentshi, uBenoit Rouquayrol kunye no-Auguste Denayrouse baqulunqa i-Résevoir-Régulateur, ejoliswe ekusebenziseni ekuhlanguleni abavukuzi kwiimigodi enezikhukhula.
I-Résevoir-Régulator ingasetyenziswa phantsi kwamanzi. Isixhobo senziwe yiklip yephunga kunye nomlomo oqhotyoshelwe kwitanki yomoya apho umculi okhuselayo aqhubela umva.
Ngomnyaka we-1871, i-physicist yaseBrithani uJohn Tyndall wasungula umphefumli womlilo owawucoca umsi kunye negesi. Ngomnyaka we-1874, umsunguli waseBrithani uSamuel Barton wagunyazisa isixhobo "esavumele ukuphefumula kwindawo apho umoya uhlawuliswa khona, okanye umphunga, umsi, okanye ezinye izinto ezingcolileyo," ngokwemvume ye-US # 148868.
UMerika Garrett Morgan unelungelo lokukhusela umkhuseleko kunye nomkhuseli womsiya ngo-1914. Emva kweminyaka emibili, uMorgan wenza iindaba zelizwe xa i-mask yakhe yegesi yayisetyenziselwa ukuhlangula amadoda angama-32 abanjwe ngexesha lokuqhuma komhlaba phantsi kweLake Erie. Uluntu lukhokelela ekuthengiseni iindawo zokukhusela ezikhuselekileyo eMelika. Abanye ababhali beembali-mlando bachaza uyilo lukaMorgan njengesiseko seMasks yase-US yamashishini asetyenziswayo ngexesha le-WWI.
Iifayile zokuqala zomoya ziquka iifowula ezilula ezifana nekhwaphu elixubile eligcinwe phezu kwempumlo nomlomo. Ezi zixhobo ziye zaguquka kwiindidi ezahlukahlukeneyo ezigqithiswe ngentloko kwaye zinyanzelwe ngamachiza akhuselekileyo. Iigoggles zamehlo kunye nezihlunu zexesha elizayo zongezwa.
I-Carbon Monoxide Respirator
IBritani yakha umoya wokuphefumula nge-carbon monoxide ukusetyenziswa ngexesha le- WW I-1915, ngaphambi kokusetyenziswa kokuqala kweempahla zerhasi yeekhemikhali. Kwaye kwafumanisa ukuba iinqobhoko zeentshaba ezingakhange zaxhaswa zanikela amanqanaba aphezulu e-carbon monoxide ukubulala amajoni kwimigxobhozo, i-foxholes kunye nezinye izinto ezikhoyo. Oku kufana neengozi zokukhupha imoto kunye nenjini yayo ivuliwe kwigalaji edibeneyo.
ICanada iCanada Macpherson yenzelwe isithwathwa "isigqoko somusi" kunye nethubhu elilodwa lokuxhuma elalikhutshwe neekhemikhali zokunqoba i-chlorine esemoyeni esetyenziselwa ukuhlaselwa kwegesi.
Iimpawu zohlobo lwe-Macpherson zisetyenzisiwe kwaye ziguqulwa yimikhosi ehlangeneyo kwaye zibhekwa njengeyokuqala ezisetyenziselwa ukukhusela izixhobo zamachiza.
I-Respirator yeBhokisi yaseBritani
Ngomnyaka we-1916, amaJamani adibanisa iidrafri zomoya ezikhudlwana ezinkulu ezinokuphefumula iikhemikhali kwiindawo zabo zokuphefumula. Ngokukhawuleza abadibeneyo bancedisa iidrafri zabo kwiimpumpi zabo. Enye yeempawu ezibonakalayo zegesi ezisetyenziswe ngexesha le-WWI yi-Respirator yeBritish Small Box okanye i-SBR eyenzelwe ngo-1916. I-SBR mhlawumbi yayisisigxina esithembekileyo kunye nesasetyenziswa kakhulu kwi-WWI.
Ngowe-1942 - u-Anne Frank uya Kufihla
I-Israel Tour Pictures: Photo Journal ye-Holy Land
I-Pedement ingenza ikhaya lakho libe yithempeli laseGrike
Indlela yokudibanisa "uMdisi" (kwiSifiso)
Ukuqala Ithempelini lePagane
Ibhentshi yeBhanki - Iseluleko seMicrosoft Spot ye-Multi-Rail Bank Shot
IsiCwangciso seSifundo: Ukutya okutyunjwa nokubala
Iimpawu eziLwazi ezivela eBotanist uGeorge Washington Carver